Luqada Ay Garsoorayaasha & Ciyaartoyda Kuwada Hadlaan Kulamada Champions League & Koobka Adduunka Oo La Ogaaday | Laacib.net
Luqada Ay Garsoorayaasha & Ciyaartoyda Kuwada Hadlaan Kulamada Champions League & Koobka Adduunka Oo La Ogaaday
February 10, 2020 Balaleti Comments Off on Luqada Ay Garsoorayaasha & Ciyaartoyda Kuwada Hadlaan Kulamada Champions League & Koobka Adduunka Oo La Ogaaday
Waxaa inta badan la isweydiiyaa luqada ay garsoorayaasha ku hadlaan marka ay dhexdhexaadinayaan kulamada Champions League ama Koobka Adduunka oo wadamo kala luqado duwan ay ka qeyb galayaan.
FIFA waxay leedahay afar luqadood oo rasmi u ah oo kala ah: Ingariis, Faransiis, Isbaanish iyo Jarmal.
Finalkii Koobka Adduunka ee 2018 oo kale waxaa garsoore ka ahaa nin u dhashay Argentina oo ku hadla luqada Isbaanishka, laakiin wadamada finalka isagu yimid waxay ahaayeen France iyo Croatia oo aan luqadaas ku hadlin hadaba muxuu garsooraha kula hadlayay ciyaartoyda? Jawaabta waa luqada Ingariiska.
FIFA ayaa qasab ka dhigtay in garsoorayaasha qabanaya Koobka Adduunka inay ku hadlaan luqada Ingariiska. Kulamada ay yeeshaan garsoorayaasha waxaa inta badan looga hadlaa luqada Ingariiska.
FIFA ayaa xitaa imtixaan Ingariis ah ka qaada garsoorayaasha dhexdhexaadinaya kulamada caalamiga ah sida Koobka Adduunka.
Tartanka loo qabto wadamada Latin America ee Copa America isna waxaa qasab ah inuu garsooraha ku hadli karo luqada Isbaanishka.
Koobka ugu xiisaha badan ee kooxaha Yurub ee Champions League isna waxaa qasab ah in garsooraha uu ku hadli karo luqada Ingariiska.
Sida kastaba horyaalada wamada, wadan walba luqadiisa ayay qasab ka dhigaan inuu garsooraha ku hadlo xitaa haddii ay ciyaartoy ajnabi ah ka ciyaarto horyaalka.
Ciyaartoyda iyo garsoorayaasha waa ay isfahmaan inta badan, xitaa mararka qaar waxaa u kala tarjuma ciyaartoy kale oo ku hadasha luqada hadba qasabka ka ah tartankaas gaar ahaan ciyaartoyda luqadaha badan ku hadli karta sida Cristiano Ronaldo oo ku hadla afka dalkiisa Portugal, Isbaanish, Ingariis iyo Talyaani.
Sean Hurd oo ah garsoore ayaa Business Insider u sheegay sannadkii 2018: “Inta badan ciyaartoyda caalamiga ah waxay ugu yaraan ku hadli karaan ereyo Ingariis ah, laakiin marka taas laga soo gudbo waxaa la isku fahmaa tilmaamta gacmaha laga bixiyo.”
Koobkii Adduunka ee 2014 ayayse fadeexad ka dhacday markii xiddigii Croatia Corluka uu ka dacwooday garsooraha reer Japan Yuichi Nishimura kaasoo ku hadli waayay kuqada Ingariiska kulankii dhexmarayay Croatia iyo Brazil.
“Waligeey ma arkin garsoore dhexdhexaadinaya Koob Adduun oo aan ku hadli karin luqada Ingariiska, wuxuu ciyaartoyda kula hadlayay luqada Japan taasoo doqonimo weyn ah.”
Xiriirka kubada cagta Japan ayaase beeniyay warka Corluka iyagoo sheegay in garsoorahooda uu si fiican ugu hadli karo luqada Ingariiska islamarkaana siminaarada FIFA uu ka qeybgalo lagu bixiyo Ingariis.